Jabra na -emelite ọkwa ngwaahịa ya na isi okwu usoro elite atọ | Akụkọ Ngwa
Jabra gbara mbọ na teknụzụ na ụda dị mma, anyị enyochala ọtụtụ ngwaọrụ ha ebe a na Actualidad Gadget na ọ kwụsịghị ịtụ anyị n'anya na ha chọrọ iji ohere nke afọ a 2021 wepụta usoro ngwaahịa mara mma iji nọgide na -enwe ọkwa dị elu. ọkwa na ụda ikuku. Jabra na -enye Elite 3, Elite 7 Pro na Elite Active, ekweisi ọhụrụ ya maka ndị niile na -ege ntị.
3 Bọchị mwepụta na ọnụahịa
Jabra na-eji Elite 3 abanye ngwaahịa mbubata ọnụ ọnụ, ngwaọrụ na-enye ndị na-ekwu okwu 6-millimeter, nhazi ngwa-ngwa, codec na Teknụzụ Qualcomm aptX HD yana ruo awa asaa nke nnwere onwe nke a ga -agbatị ruo awa 28 ekele maka igbe chajuru agụnyere. O doro anya na anyị enweghị mkpọtụ mkpọtụ na -arụ ọrụ, mana anyị na -ekwusi ike na ekele maka ọrụ HearThrough, ndị ọrụ nwere ike ịnweta ụda gburugburu ha. Agba agba ga -agụnye acha anụnụ anụnụ, isi awọ gbara ọchịchịrị, lilac, na beige ọkụ.
Igwe isi ọhụrụ ndị a dị elu sitere na Jabra ga-egosipụta MultiSensor Voice, teknụzụ Jabra iji chepụta ụda dị mma ọkachamara. O doro anya na ọ na -esonyere teknụzụ nkakasị mkpọtụ na -arụ ọrụ nke akọwapụtara ụlọ ọrụ ahụ.
N'ọkwa nnwere onwe, anyị ga -anụ ụtọ egwu awa 9 na -aga n'ihu na ANC na -arụ ọrụ ga -ebili ruo awa 35 ma ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka igbe nchaji, nke n'agbanyeghị, nwere nguzogide mmiri IP57 n'ozuzu ya. Iji nweta teknụzụ aptX HD, ọ na -eji Bluetooth 5.2 yana o doro anya na ha na -agba nzọ na enwere ike iji onwe ha (na -enweghị ekwentị mkpanaka), yana sistemụ njikọta n'otu oge na ọtụtụ ngwaọrụ.
N'akụkụ nke ya, ya na gam akporo, ndị enyemaka enyemaka mebere dị ka Google Home na Alexa ga -ejikwa usoro njikọta, ebe ha na iOS ha ga -arụ ọrụ ọkacha mma site na Siri.
Jabra Elite 7 nọ n'ọrụ na mkpuchi ShakeGrip TM nke ọsụ ụzọ, zuru oke maka ndị ọrụ nwere ụdị ndụ ha na -arụ.
Bọchị mwepụta na ọnụahịa
Elite 3 ga -adị site na Septemba 1, ebe Elite 7 Pro na Elite Active ga -adị site na Ọktọba 1. Ngwaahịa niile ga -adị na ụlọ ahịa ahọpụtara na ọnụahịa akwadoro nke:
Elite 7 nọ n'ọrụ: € 179,99
Ọnụahịa 3: € 79,99
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Jabra na -emelite ụdị ngwaahịa ya na isi okwu Elite atọ